FANITSIANA NY LALANA MIFEHY NY SERASERA : Nihaona tamin’ny mpanao gazety ao Diana sy Sava ny minisitra
Tonga taty Antsiranana, ny alatsinainy 7 jolay folakandro teo ny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina sy ireo delegasiona niara-dia taminy. 9 juillet 2019
Mahakasika ny fakan-kevitra isam-paritany momba ny fanitsiana ny lalàna mifehy ny serasera no anton-dian’izy ireo. Araka izany dia nisy ny fihainoana ireo mpanao gazety namoaka ny heviny. Nahitana ireo mpanao gazety avy ato amin’ny Faritra Diana sy Sava niatrika izany tao amin’ny Alliance Française taty an-toerana.
Hanatsarana ny tontolon’ ny asa fanaovan-gazety ny antony hanaovana ny fanitsiana, ka izany no antony hanasiana fikitihana satria araka ny nambaran’ny minisitry ny serasera dia " tsy ilay teny niarahana no nivoaka tamin’ny fandaniana nisy teo aloha, na teo aza ny fanoherana". Araka ny voalaza dia fiantohana ho an’ny mpanao gazety ny lalàna vaovao izay hivoaka sy fiarovana ny mpanao gazety ihany koa.
Ankoatra izany dia voalaza fa fampiakarana ny lentan’ ny mpanao gazety araka ny tokony ho izy, mba hahaleo tena ny holafitra, indrindra ny hanomezana fahefana bebe kokoa ary koa mba hisitahan’ny minisitera ny fitantanana ny holafitry ny mpanao gazety. Ny tanjona dia ny mba handaniana eo anivon’ny filan-kevitry ny minisitra.